२५ अर्ब नतिर्न चलखेलः दरपीठ हुनुपर्ने रिट सर्वोच्चमै दर्ता हुनु शंकास्पद | Citizen Post News
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ मा एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि उक्त रकम नतिर्न एनसेलले सर्बोच्चमा मुद्दा हालेर अल्झाउन खोजेको छ । दरपीठ गर्नुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले किन दर्ता गर्यो भन्ने बिषय कानुनी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्नका रुपमा उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ चैत २६ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो रिट दर्ता हुनु नै आश्चर्यको बिषय हो, एनसेलको लाभकर असुली अभियानका अगुवा पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ ले प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेको छ । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । महानिर्देशकले हेर्ने हो । त्यहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो ।
तर एकै पटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विवरण मुनासिब नलागे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष जाने बाटो हुँदाहुँदै एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत् गएको छ । यसले आयकर ऐनका यी दफा खारेज नै भए बराबर भएका छन्, खत्रीले भने, आयकर ऐन अब किन चाहियो, अब ठूला करदाताहरु करछली गर्न सिधै सर्वोच्च अदालत जाने नजीर बस्ने खतरा छ । राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा दरपीठ गर्नुपर्ने रिट दर्ता गरिएको छ ।
एनसेलको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु परेका छन् । जसका कारण देशले अरबौं कर गुमाउनुपर्ने भएको छ । साना करदातालाई कस्ने ठूलालाई उन्मुक्ति दिने दलहरुको चालबाजीले देशमा कसरी समृद्धि आउँछ ? जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा भट्याउँदैआएका छन् । पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न आदेश दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो र सोही बमोजिम कर निर्धारण भयो ।
एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयअनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन ताकेता गरिएको गरिएको थियो । तर, त्यो समय मंगलबार सकिनु अघि एनसेल पुनः सर्वोच्चमा गएको हो । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा एनसेलको तर्फबाट विचौलियाको भूमिका खेली रिट दायर गर्नमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष एवम् टेलिकम क्षेत्रमा माफियाका रुपमा परिचित उपेन्द्र महतोको ठूलो हात रहेको छ । एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यले महतोमार्फत् सर्वोच्चमा चलखेल गरेको स्रोत बताउँछ । महतोले एनसेलको मुद्दा मिलाउनका लागि आफ्ना एजेन्ट दिपक तिमिल्सिनामार्फत् सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्न खोजेको बुझिएको छ ।
जबकि यसअघि एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराउन पनि महतोले नै भूमिका निभाएका थिए । सतिशलाल आचार्यलाई देखाउन उनले चलखेल नै गरी एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराएका थिए । महतोलाई आफूले जे चाह्यो त्यो गर्नसक्छ भन्ने आभाष दिनु थियो । एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराएर उनले त्यो देखाए । एक्जियटासँग सुरुमा महतोले डिल गरेका थिए । पछि सतिसलालले लोकमानसिंह कार्कीलाई हातमा लिएर एक्जियटालाई एनसेलमा लगानी गर्न भित्र्याएपछि महतो उनीसँग बदला लिने उपयुक्त ताकमा थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कान्तिपुर पत्रिका भरपूर उपयोग गरे । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले एनसेलको लाभकर असुली हुनुपर्ने फैसला गराउन दबाब र प्रभाव पारे । राणालाई पनि एनसेलको लाभकरको फैसला गरेर सेलिब्रेटी बन्नु थियो । त्यही भएर एनसेलको लाभकर असुली गर्न आदेश दिए । तर, महतोको शरणमा सतिसलाल परेपछि अहिले फेरि रिट दायर गरी १४ अर्ब मात्र लाभकर तिर्नेगरी सेटिङ मिलाउन महतोले नै गरेको स्रोतको दाबी छ । ३५ अर्बको पेरीफेरीमा मात्र लाभकर तिर्नेगरी सेटिङ मिलाएर रिट दायर गरिएको छ । २३ अर्ब तिरिसकेको र अब १४ अर्ब मात्र तिर्न एनसेल लागेको छ ।
एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको छ । एनसेलले आफूमाथि लगाइएको जरिवाना र व्याज लगाउने करदाता कार्यालयको आदेश बदर गर्न माग गरी ठूला करदाता कार्यालयलाई नै चुनौती दिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा आफैले गरेको आदेश विपरीत कसरी एनसेललाई २५ अर्ब छल्न देलान् ? एक कानुन ब्यवसायी प्रश्न गर्छन् । पछिल्लो समयमा लाभकर कम गराउन आचार्य र तिमिल्सिनाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म चलखेल गर्दै आएका छन् । यूनाईटड पोष्टबाट